Yongeza imixholo engezantsi kwiividiyo zakho ngeVidiyo engeza izihlokwana Pro | Ndisuka mac
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukhuphe i-iPhone yakho ukurekhoda imeko ngaphandle kokuthathela ingqalelo ukuba ngaba isixhobo sethu siza kubanakho na ukuthatha isandi sabantu abathethayo. Okanye mhlawumbi, ukwazile ukukhuphela imuvi ongayifumaniyo naphi na, kodwa kuguqulelo loqobo, ekunyanzela ukuba ujonge imixholo engezantsi kwaye uyihlanganise ukuze yenze iseti enye, ngaphandle kokuba ufuna ukudlala ixesha elifanelekileyo kunye nevidiyo yakho yesiqhelo ukuze ukwazi ukungqamanisa ngokugqibeleleyo zombini iingoma, iaudiyo kunye nevidiyo. Kodwa ukuba uyafuna dibanisa zombini kwaye ulibale ngokupheleleyo ungasebenzisa isicelo seVidiyo ongeze isihlokwana sePro.
Ividiyo yongeza isihlokwana sePro Pro, njengoko igama libonisa, lisivumela ukuba sijoyine umkhondo weaudiyo kunye nevidiyo, sinikezela ngesiphumo esidibeneyo kwifayile enye, efanelekileyo yokwabelana nabanye abahlobo okanye ukuba nefayile enye kuphela kuloo bhanyabhanya okanye ukurekhodwa ekhaya onyanzelwe ukuba ungeze imibhalo engezantsi ngenxa yeaudiyo Kwakusezantsi kakhulu okanye ngenxa yengxolo yangasemva engabhalwanga phantsi kweemeko.
Ukusebenza Ividiyo engeza isihlokwana Pro iyahambelana nefomathi zevidiyomp4, mov, rm, rmvb, avi, dv, mkv, wmv, m4v, mpeg, 3gp, 3g2, 3gp2, mpg, flv, f4v, asf, ts, tp, trp, mts, m2ts, dat, mod, nsv , evo phakathi kwabanye kunye neefomathi ze .srt, .ass kunye ne-ssa ukuba sithetha ngemibhalo engezantsi. Esi sicelo sinexabiso eliqhelekileyo le-5,39 ye-euros kwiVenkile ye-Mac, kodwa ngexesha lokubhala eli nqaku lalifumaneka simahla, ke ukuba lisafumanekile, ungathatha ithuba lokubonelela kwaye uchithe ezo 5 euro kancinci kwezinye izinto.
Ividiyo yongeza umxholo ongezantsiMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Yongeza imixholo engezantsi kwiividiyo zakho ngeVidiyo engeza imixholo engezantsi
Ulusebenzisa njani uvavanyo lwe-Apple Hardware kwiiMacs ezithengiswe ngoJuni 2013